အများစုမှာမိဘများသူငယ်တန်းမှသူတို့သားသမီးယူပါ။ သင်ဤအဖွဲ့အစည်းသွားရောက်ကြည့်ရှုသောအခါကလေးကကျောင်းကအဆင်သင့်ရတဲ့, လွတ်လပ်ရေးသင်ယူခြင်း, ဆက်သွယ်ရေးကျွမ်းကျင်မှုဖြစ်ပေါ်ပါသည်။ သို့သော်ပညာရေးနှင့်မိဘအတူတကွတစ်ဦးချင်းစီသည်သူငယ်၏သဟဇာတဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အခွင့်အလမ်းအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှသာ။ ဒါဟာအစည်းအဝေးများမှန်မှန်စနစ်တကျကလေးစောင့်ရှောက်ရေးလုပ်သားများနှင့်မိဘများဖြစ်ကြသည့်အမျိုးမျိုးသောပြဿနာများဆွေးနွေးရန်နှိပ်ကိစ္စများမှဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပါသည်။ မိဘ-ဆရာညီလာခံ သူငယ်တန်း၏အလယ်တွင်အုပ်စုတစ်စုသတင်းအချက်အလက်ဖြစ်, စာနယ်ဇင်းပြည်တွင်းပြဿနာများကိုမြှင့်နိုင်ပါ။ ဒါပေမယ့်အဖြစ်ပညာတတ်များကြီးပြင်းခြင်းနှင့်သားသမီးများ၏ပညာရေး၏ပိုင်ထိုက်သောအာရုံစိုက်ကြိုးစားပါ။ ဖြစ်ရပ်များကို formats အမျိုးမျိုးနဲ့တှငျကငျြးပခဲ့နိုင်ပါသည်။
တစ်ဦးသို့မဟုတ်အစည်းအဝေးများပင်နံပါတ်သူတို့ကိုထဲမှာရှိသကဲ့သို့အသွတ်သွင်းသားသမီးများ၏ပညာရေး၏ပိုင်ထိုက်သောမှအမူအကျင့်, ကောင်းသောအလေ့အထ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုကျိန် ဆို. ပူဇော်ရပါမည်;
ကသင်ယူမှုအာရုံစိုက်ဖို့လည်းအရေးကြီးပါတယ်, ဆရာများဘယ်လိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနှင့်အသုံးဝင်သောအကြောင်းကိုမိဘများပြောပြနိုင်, သင်ကလေးနဲ့အတူအိမ်မှာအချိန်ဖြုန်းနိုင်ပါ။
အဲဒီအဖြစ်အပျက်ကပိုစိတ်ဝင်စားဖို့နှင့်အမှတ်ရစရာဖြစ်ခဲ့သည်ကြောင့်တခါတရံတခုပုံမှန်မဟုတ်သော form မှာထွက်ယူသွားတတ်၏။
ဒါဟာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဂိမ်းတစ်မျိုးပြင်ဆင်ထားရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဇာတ်ညွှန်းရေးဖို့ဒီလိုအပ်ချက်အဘို့။ ဒါဟာအမှန်တကယ်ပြဿနာကိုသရုပ်ပြပါလိမ့်မယ်တဲ့အခွအေနေရှုံးနိမ့်ရမည်ဖြစ်သည်။ အလယ်အုပ်စုတွင်မိဘတစ်ဦး-ဆရာအစည်းအဝေးတွင်ကလေးတွေနဲ့အတူလာနိုင်ပါတယ်။ ကလေးများကိစ္စကိုပေါ်မှာကစားရန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဆွဲပါ။ ဥပမာအားဖြင့်, ပညာရေး၏ခေါင်းစဉ်အပေါ်ကလေးကမနာခံမှုနှင့်မည်သို့ဤပြဿနာနှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်မှအပေါ်တစ်ဦး skit ကိုပွငျဆငျနိုငျပါ။ ယောက်ျားတွေအနုတ်လက္ခဏာအပြုအမူများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောရွေးချယ်မှုများပြသနိုင်ပြီး, မိမိတို့၏မိခင်နှင့်အတူပညာရေးအတူတူတစ်ဦးချင်းစီအခွအေနေခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက်ကိုရှာဖွေပါလိမ့်မယ်။
မူကြို၏အလယ်တွင်အုပ်စုတွင်မိဘများ၏အစည်းအဝေးများ၏နောက်ထပ် Non-ရိုးရာပုံစံကိုတစ်ဦးမာစတာအတန်းအစားဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သူတို့ကအိမ်မှာရုပ်သေးရုပ်ရှင်ရုံများနှင့်ဖျော်ဖြေပွဲပြင်ဆင်နေ, လက်မှုပညာအောင်၏နည်းလမ်းများသရုပ်ပြဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဒါကကလေးများ၏ပညာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအကျိုးရှိမည်ဖြစ်သောမိသားစုအပန်းဖြေခြင်းနှင့်ဖျော်ဖြေရေး၏ရွေးချယ်မှုများနှင့်အတူခင်မင်သိကျွမ်းရခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။
ဒါ့အပြင်မကြာခဏ၏ပုံစံအတွက်မိဘများအတွက်အစည်းအဝေးများကျင်းပရန် "စားပွဲဝိုင်း" ။
အဆိုပါကလေးနှင့်အသစ်အဖေ - ချိန်းတွေ့ဘို့ပြင်ဆင်ခြင်းငှါအဘယ်သို့?
Will Smith ၏သားတော်ကို
သူငယ်တန်းအတွက်ကျောင်းကပွဲမှအဆိုပါဖိတ်စာများ - Templates ကို
နေ့ဓာတ်ပုံ: 39 နှစ်အရွယ် Shakira Instagram ကိုအတွက်မိတ်ကပ်မပါဘဲ
Kirstie Alley ရေခဲမုန့်နှင့်အတူစိတ်ဖိစီးမှုစီးကရက်နှင့်အတူရုန်းကန်နေတာဖြစ်ပါတယ်
Krasnaya Polyana - ဆွဲဆောင်မှုများ
ဆောင်းရာသီတွင်အစိမ်းရောင်ခရမ်းချဉ်သီး - အရသာထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးများအတွက်မူရင်းချက်ပြုတ်နည်းများ
Angelina Jolie နဲ့ Brad Pitt - တကယ်ကွာရှင်း?